Akpụkpọ ụkwụ e ji aka mee maka onye na-awagharị gị - Buddhatrends
Akpụkpọ ụkwụ e ji aka mee maka Onye Na-agba Egwuregwu Na Gị
Ị chetụla banyere akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ? Ihe mere ha ji dị oke ọnụ ma onye ọ bụla chọrọ ka ha nwee ya? A shoemaker na-etinye obi ya na mkpụrụ obi ya n'ime ịmepụta na ịtụgide akpụkpọ ụkwụ na nlekọta na nlekọta zuru oke; ya mere, akpụkpọ ụkwụ e ji aka mee adịghị ka akwa akpụkpọ ụkwụ siri ike na nke siri ike.
Na ndụ a ọsọ ọsọ, ọdịdị ejiji na-agbanwe ngwa ngwa karia oge, na onye ọ bụla nọ n'ọgba ikpu ka ọ daba ma bụrụ onye na-emepụta ihe kachasị mma. Ma ndị na-awagharị awagharị adịghị agba ọsọ n'ọsọ a gbara ọsọ ma ọ bụ mmụọ ha ejikọtara ya na ụdị nke ụbọchị ahụ. Ha maara otú ha ga - esi nọgide na - ejide onwe ha; ndi mmadu na-acho onu ogugu ndi mmadu na-enweghi mmasi banyere omenala na ndi mmadu.
Ọzọkwa, nkasi obi, ịke, àgwà, na ogologo oge nke akpụkpọ ụkwụ a na-eji aka eme ihe agaghị ekwe omume inweta site akpụkpọ ụkwụ.
Akpụkpọ ụkwụ Ankle akpụkpọ ụkwụ:
Ọ bụrụ na ị hụrụ akpụkpọ ụkwụ ụkwụ ụkwụ, mgbe ahụ jirikere na ị ga-ejide onwe anyị site n'ichekwa akpụkpọ ụkwụ anyị. Ndị nkwekọrịta nwere ike ịhọrọ akpụkpọ ụkwụ nkwonkwo ụkwụ anyị.
Maka nchọpụta a na-achọpụta na nyocha nke ọma, họrọ akpụkpọ ụkwụ ụkwụ, ụkwụ, ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ ụkwụ ụkwụ. Mee ka ije gị kwuo okwu ahụ.
Kpoo akpụkpọ ụkwụ ụkwụ aka gị site n'itinye ha na akwa akwa ụkwụ, ogologo ụkwụ ogologo ụkwụ ma ọ bụ gbagowe jeans.
Achịcha & Ihe Nri Maka Mpempe akwụkwọ Semi:
Ngwurugwu zuru okè maka ụdị ọkara na mgbe e jikọtara ya na ejiji kwesịrị ekwesị; ha zuru oke maka nlepụ anya na-arụ ọrụ dịka ihe ngosi. Mgbatị ma ọ bụ ballerina, ma na-ebu ụzọ aghụghọ nke amara na ịdị mma.
Soro ọnụ ụlọ gị na mkpụmkpụ, uwe jeans ma ọ bụ Obere maka ihe eji emepụta ego. Akpụkpọ ụkwụ e ji aka mee bụ ihe niile ị na-ekwu na ị na-esite n'aka gị.
Ejiri aka nke ikiri aka:
Enweghị uwe mgbochi zuru oke na-enweghị akpụkpọ ụkwụ dị elu - nyiwe, ikiri ụkwụ, ọkpụkpụ ma ọ bụ kọnetị - họta ihe nke obi gị na-achọ, jikọta ya na ejiji ọ bụla ma kpaa àgwà gị.
Onye nwere onwe ya na-achọ ịhụ nnwale, ọ bụghịkwa ọdịnala na ọdịnala ya kpuchiri ya. Were akwa ụkwụ na ikpo okwu na ụkwụ ụkwụ na sọks maka ihe na-adọrọ mmasị ma ọ bụ mee ka ha nwee obere uwe, obere uwe ma ọ bụ maxis. Ka gị aesthetics ịke gị!
Obere Hippie akpụkpọ ụkwụ na akpụkpọ ụkwụ:
Ụdị Boho bụ maka agba na usoro, ọ bụrụ na ọ bụ akpụkpọ ụkwụ ka ọ na-eme ka ọ dịkwuo ụtọ maverick n'ime gị. Ị nweghị ike ịga na-ezighi ezi na nchịkọta akpụkpọ ụkwụ retro-hippie a. Chọpụta ihe nke na-enye gị ohere igosipụta onye ọ bụla n'ime gị n'ụzọ kasị mma.
Jiri ya na-eji ejiji mara mma ma ọ bụ kwekọọ ya na boho maxi; ka echiche gị gaa ọhịa.
Akpụkpọ ụkwụ lines, Flats na Loafers:
Ime akwa na akwa na agba ọhụụ bụ mgbakwunye na-adọrọ adọrọ ma na-enye onye na-ahụ anya, na-eto eto. Ejikọtara ya na ejiji ma ọ bụ obere mkpịsị ụkwụ, ha na-agbaso ọnụma akpụkpọ ụkwụ kachasị ọhụrụ ma na-enye ekele maka ọdịmma gị na otu oge.
Ma ị bụ onye nkwekọrịta na-achọ ịhapụ ihe dị mfe ma dị mfe ma ọ bụ onye na-enweghị ihe ọ bụla nke na - achọ ịnwale na agba, na ụdị; nchịkọta akpụkpọ ụkwụ a eji aka mee ihe niile. Anyị aka akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ bụ nke a na-ahazi maka nkasi obi na-enye gị ohere ịkọwa onwe gị n'ime Buddha onwe gị. Gaa na nke anyị Home Page maka ihe ndị ọzọ dị iche iche iche iche iji gosi àgwà ọma gị!